फेब्रुअरी 12, 2019	समाचार
अनलाइन अनलाइन क्यासिनोहरूको लागि प्राय: प्रायः खेल खेल्न वा खेलाडीहरूको संख्या बढाउनका लागि उनीहरूको लागि प्रोत्साहनका लागि केही बोनसहरू, वा निःशुल्क पैसा प्रस्ताव गर्न मिल्दो हो। तर, नि: शुल्क पैसाको रूपमा उल्लेख गरिसकेपछि, बोनसहरू लागतमा आउँछन् - त्यहाँ धेरै अस्पष्ट आवश्यकताहरू छन् जसले खेलाडीलाई खोज्न आवश्यक छ। अन्यथा, उहाँले न केवल बोनस खोल्नु हुन्छ तर तिनीहरू पनि डिपो खारेज गर्दछ। मियामी क्यासिनो क्लब सामान्यमा, कैसीनो दुई प्रकारका बोनसहरू प्रस्ताव गर्छन्। पहिलो दयालाई "चिपचिपा बोनस" भनिन्छ, जुन यसले फिर्ता लिन सकिदैन। खेलाडीले पहिले यो wagering मार्फत कमाउन आवश्यक छ र त्यसपछि यो बोनस खेलाडीको खातामा थपियो। ध्यान दिनुहोस् कि खेलाडीले प्लेथ्र आवश्यकताहरू पूरा नगरेसम्म, तिनीहरू विन्निङ वा बोनस हटाउन सक्षम हुदैनन्। तथापि, चिपचिपा हुन, बोनस कहिल्यै फिर्ता लिइएन, किनकि जब खेलाडीले winnings हटाउने निर्णय गरे पछि क्यासिनो पुन: प्राप्त गर्दछ। दोस्रो प्रकारका बोनसहरूको लागि, यो प्लेयरको विन्निहरू सँगै एकै ठाउँमा पुग्न सकिन्छ जब उल्लिखित आवश्यकताहरू सन्तुष्ट छन्। जस्तै चिपचिपा बोनस नगद बाहिर असंभव छ, तिनीहरू अन्य प्रस्तावित बोनस भन्दा बढी अप्ठ्यारो हुन्छन्। स्वतन्त्र स्लटहरू त्यसबाहेक, त्यहाँ एक प्लेथ्रो अवस्था छ कि छलफल गर्न आवश्यक छ। Playthrough आवश्यकताहरू फरक हुन सक्छन्: त्यहाँ दुई प्रकारका तिनीहरू छन्। पहिलो प्रकारका आवश्यकताहरू यो हो कि खेलाडीले बोनसलाई साथ दिएका साथसाथै बोनसको चासो लिनुपर्छ (र जसले जुन बोनस पुन: प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ) केहि निश्चित समय। दोस्रो प्रकारको प्लेथ्रोको लागि, यो प्लेयरलाई मात्र बोनसको लागि एक प्रक्रिया चाहिन्छ। अघिल्लो अवस्थामा जस्तै, यदि तपाईंलाई जम्मा जम्मा रकम र बोनस दुवै आवश्यक छ भने, त्यसपछि तपाईलाई योगी लगाउन आवश्यक समयको संख्या निकै कम हुनेछ। भव्य भाग्य क्यासिनो एक अनलाइन क्यासिनोमा विभिन्न खेलहरूको लागि विभिन्न घर किनारहरू छन्। स्लॉट, जस्तै ब्लेक खेलहरू, क्यासिनोका लागि उल्लेखनीय उच्च फाइदाहरूद्वारा विशेषता छन्। अन्य क्यासिनो गेमहरू धेरै भिन्न हुन्छन् तर सामान्यतया धेरै उच्च वा धेरै कम छैन। यो क्यासिनोहरूको लागि खेलाडीहरूलाई ती खेलहरूमा उत्सुक पार्न प्रोत्साहन दिनको लागि फायदेमंद छ जसले उनीहरूको उच्च मार्जिन ल्याउँछ, किनभने यो आयको मुख्य स्रोत हो। यसैले, कैसीनोहरूको लागि यो सामान्य छ कि अनलाइन स्लट खेल गर्दा प्लेथ्र अवस्थाहरू पूर्णतया सन्तुष्ट हुन सक्दछ। त्यहाँ कैसीनोहरू पनि छन् जुन निचला घर किनाराहरूसँग खेलहरू छनौट गर्न अनुमति दिन्छ, तर यस अवस्थामा प्लेयरले सामान्य रूपमा उच्च wagering आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। गफ स्लटहरू अनलाइन क्यासिनोको एक महत्वपूर्ण तत्व यो हो कि खेलाडीहरूले प्राय: बजाउनको लागि बोनस प्रदान गर्दछ। केहि भौगोलिक प्रतिबंधहरू दिमागमा राख्नका लागि छन्: केही देशहरू आफ्ना खेलाडीहरूले गरेको प्रणालीको अघिल्लो उल्लङ्घनको लागि बोनस फिर्ता लिने प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रायः देखी हेरिएको उल्लङ्घनले एक पटक एक बोनस प्रति व्यक्ति प्राप्त गर्न खेलाडीहरूसँग बहु खाताहरू हुन्छन्। यसरी, खेल सुरू गर्नु अघि हामी बोनस सम्झौताका नियमहरू सावधानीपूर्वक पढ्न सुझाव दिन्छौं। सामान्यतया धेरै अस्पष्ट नियमहरू छन् र भाषाहरू खेलाडीहरूको लागि बुझ्नका लागि कठोर हुन सक्छन्
शीर्ष5धेरै-खेलिएको खेल क्यानाडा गर्व गर्नुहोस्
एक गेमिंग रूटमा अटकिएको छ?
माथि5सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी क्यासिनो बाहिर वेगास
सही क्यासिनो प्लेसूचीहरू सिर्जना गर्दै
दायाँ ल्याप्टप छनौट गर्नुहोस्
अर्को मायालु मुद्रा मन्त्रालय?
ब्ल्याक जैक रणनीतिहरु: कसरि विन
धेरै टेक अल्जाइमरको लागी लिङ्क गरिएको छ
एक जीतको लागि इच्छा
अनलाइन क्यासिनोमा बोनस र प्लेथ्रू आवश्यकताहरू अपडेट गरिएको: नोभेम्बर 29, 2019 लेखक: Damon
1.0.1 शीर्ष5धेरै-खेलिएको खेल क्यानाडा गर्व गर्नुहोस्
1.0.2 एक गेमिंग रूटमा अटकिएको छ?
1.0.3 जब चिप्स तल छन्
1.0.4 माथि5सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी क्यासिनो बाहिर वेगास
1.0.5 सही क्यासिनो प्लेसूचीहरू सिर्जना गर्दै
1.0.6 दायाँ ल्याप्टप छनौट गर्नुहोस्
1.0.7 अर्को मायालु मुद्रा मन्त्रालय?
1.0.8 ब्ल्याक जैक रणनीतिहरु: कसरि विन
1.0.9 धेरै टेक अल्जाइमरको लागी लिङ्क गरिएको छ
1.0.10 एक जीतको लागि इच्छा
बोनस र प्लेथ्रु आवश्यकताहरू ...